शाहरुखलाई कसरी उछिन्दै छिन् उनकै छोरीले ? – SamajKhabar.com
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: २८ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०६:५९
शाहरुख सँग आज के छैन पैसा,प्रतिष्ठा र प्रसिद्धि ? उनी बलिउडमा सफल मात्रै होइन, संघर्षले आज बलिउडमा जुन स्थान बनाए जो-कोहिले सोच्न सम्म सक्ने कुरा होइन।
शाहरुखको उमेर ढल्किदैं छ।चढ्दो उमेरसँगै मानिसका सबैकुरा विस्तारै हराउँदै जान्छ। सुन्दरता,चर्चा,क्षमता यो कसैले पनि रोक्न-छेक्न सक्ने कुरा होइन।उमेर चढे पनि शाहरुखको चर्चा भने कम भएको छैन र उनी यति छिट्टै बलिउड बाट हराउने सेलिब्रेटि पनि होइनन्। तर अहिले बलिउडमा शाहरुखको भन्दा पनि उनको छोरीको धेरै चर्चा चल्न थालेको छ।उनकी छोरी सुहनाले के खाइन्,के लगाइन्,आनीबानी कस्तो छ,यस्तै-यस्तै? मिडियाहरुले उनलाई एकदमै पछ्याउने गर्छन्।
२८ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०६:५९ मा प्रकाशित